သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ယနေ့ခေတ်မှားယွင်းသောအယူဝါဒ | Real Conversion
ဇွန်လ ( ၁၇ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
သင်တို့ကိုင်ဆောင်သည့်ကျမ်းစာ တိမောသေဒုတိယစာစောင် အခန်းသုံးကို ကြည့် ကြပါစို့။ Scofield သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းစာအုပ်တွင် စာမျက်နှာ ၁၂၈၀ တွင် တွေ့ရပါ သည်။ ယခုဖွင့်ကြည့်ကြပါစို့။ ထိုကျမ်းစာကို သင်တို့ကျမ်းစာအုပ်တွင် လှန်လျက်ထားကြပါ။
တိမောသေဒုတိယစာစောင် အခန်းကြီးသုံးနှင့်လေးသည် ယနေ့ကာလတွင်ရှိသော ကျွန်တော်တို့အတွက် အလွန်ပင် အရေးကြီးသည့် ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်ကို သတိထားမိသည်။ တိမောသေဒုတိယစာစောင်သည် တမန်တော်နောက်ဆုံးရေးသားထဲသော ကျမ်းစာဖြစ်သည်။ အေဒီ ၆၇ ဝန်းကျင်တွင် ရေးသားထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းကို သွန် သင်သောသူဖြစ်ရခြင်းကြောင့် နိရိုးဘုရင်က ပေါလုကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ကော်လိုစီယမ်နှင့်မနီးမဝေးတွင်ရှိသော မာမီယာတိမ်းအကျဉ်းထောင်တွင် သံကြိုးဖြင့် ချုပ် နှောင်ခံခဲ့ရသည်။ မှောင်အတိဖြစ်သော ထိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ ကျွန်တော်နှင့်ဇနီးသည် အ လည်အပတ်ရောက်ခဲ့သေးသည်။ ဤပေးစာကို ရှင်ပေါလုရေးသားသည်မှာ ထိုနေရာ၌ပင်ဖြစ် ပါသည်။ သူသည် ၂ တိမောသေကို ရေးသားအပြီး လအနည်းငယ်အကြာတွင် ခေါင်းဖြတ် ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ၂ တိမောသေကိုရေးသားရာတွင် မှားယွင်းသောအချိန်ကာလ- ခရစ်ယာန် ဘာသာကို မယုံကြည်ငြင်းပယ်သောအချိန်ကာလတွင် ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့် မည်သို့အ သက်ရှင်နေထိုင်သင့်ကြောင်းကို ပြသရန် ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော် တို့လက်ရှိအသက်ရှင်သောအချိန်ကာလအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀ နှင့် ၂၁ ရာစုနှစ်များသည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတစ်လျှောက် ဘုရားမဲ့အဖြစ်ဆုံးကာလများဖြစ်သည်။ အခန်းသုံး၊ အပိုဒ်ငယ်တစ် ကို ကြည့်ကြပါစို့။
“နောင်ကာလသည် ခဲယဉ်းသောကာလဖြစ်မည်ဟု သိမှတ်လော့။” ( ၂ တိ ၃း ၁ )
ကျေးဇူးပြု၍မော့ကြည့်ပါ။ စာရေးဆရာအချို့က ခရစ်တော်ပြန်လည်တက်ကြွသည့်အ ချိန်မှစ၍ ယခုချိန်အားလုံးအကျုံးဝင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ထိုသို့သောယုံကြည်ချက်ကို ကျွန် တော်သိပ်လက်မခံလိုပါ။ ဒေါက်တာ J. Vernon McGee က “ကျွန်တော်တို့သည် နောက်ဆုံး သောကာလဆီသို့ ဦးတည်နေသည်ကို ယုံကြည်သည်….. ထိုကာလမတိုင်မှီ အချိန်ကာလအ တွင်း၌ အသက်ရှင်နေကြသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ အချိန်ကာလအားဖြင့် မည်မျှကြာမြင့်မည် ကို မသိသော်လည်း ပို၍ဆိုးသွင်းလာမည်ကိုတော့ သိထားသည်” ဟုဆိုပါသည်။ (McGee, Thru the Bible; ၂ တိမောသေ ၃း ၁ မှတ်စု ) နောက်ထပ်ကျမ်းပိုဒ်များက ပထဝီအနေအထား အရ ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သောကာလကို ပုံဆောင်ထားပါသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၂-၇ ကို ကြည့်ကြပါစို့။
“လူတို့သည် ကိုယ်ကိုကိုယ်ချစ်သောသူ၊ ငွေကိုတပ်မက်သောသူ၊ ဝါကြွားသောသူ၊ ထောင်လွှားစော်ကားသောသူ၊ သူ့အသရေကို ရှုတ်ချသောသူ၊ မိဘစကားကိုနားမထောင်သောသူ၊ ကျေးဇူးမရှိ သောသူ၊ သန့်ရှင်းခြင်းမရှိသောသူ၊ ပကတိကြင်နာ စုံမက်ခြင်းနှင့် ကင်းသောသူ၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့သောသူ၊ ချောစားတတ်သောသူ၊ ကိုယ်ဣ န္ဒြေကိုမချုပ်တည်းနိုင်သောသူ၊ ပြင်းထန်သောသူ၊ သူတော်ကောင်း ကို မုန်းသောသူ၊ သစ္စာကိုဖျက်တတ်သောသူ၊ သတိပေးခြင်းကို မခံ သောသူ၊ မာန်မာနနှင့်ယစ်မူသောသူ၊ ဘုရားသခင်ကိုနှစ်သက် သည်ထက် ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းကို သာ၍နှစ်သက်သောသူ၊ ဘုရား ဝတ်၌မွေ့လျော်ယောင်ဆောင်၍၊ မွေ့လျော်ခြင်းတန်ခိုးကို ငြင်း ပယ်သောသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ထိုသူတို့ကို ရှောင်ကြလော့။ ဒုစရိုက် အပြစ်ကိုထမ်းရွက်၍၊ အထူးထူးအပြားပြားသောလောဘကိလေ သာသွေးဆောင်ရာသို့လိုက်၍၊ အစဉ်သင်သော်လည်း သမ္မာတရား ကို လေ့ကျက်ခြင်းသို့ အလျင်းမရောက်နိုင်သော မိန်းမမိုက်တို့ကို၊ အိမ်ထဲသို့ဝင်၍ ဘမ်းသွားသောသူတို့သည် ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်ကြ ၏။” ( ၂ တိ ၃း ၂-၇ )
မစ္စတာ Olivas က ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကို စွန့်ခွါသွားသောအခါ အသင်းတော်ကို ပြိုကွဲ ရန် လုပ်ဆောင်သောလူများစာရင်းနှင့်တူညီနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် နောက်ဆုံးသော ကာလအတွင်း အသက်ရှင်နေကြပါသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၂ နှင့် ၁၃ ကို ကြည့်ကြပါစို့။
“ယေရှုခရစ်၏တရားတော်နှင့်အညီ၊ ဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်၍ နေ ခြင်းငှါအလိုရှိသောသူအပေါင်းတို့သည် ညှင်းဆဲခြင်းကို ခံရလိမ့် မည်။ ဆိုးညစ်သောသူ၊ လှည့်ဖြားသောသူတို့မူကား၊ သူတပါးကို ၎င်း၊ ကိုယ်ကို၎င်းလှည့်ဖြား၍ ဆိုးညစ်ခြင်း၌တရွေ့ရွေ့တိုးပွါးကြ လိမ့်မည်။” ( ၂ တိ ၁၂-၁၃ )
ဤကျမ်းပိုဒ်များက ဖောက်ပြန်သောကမ္ဘာကြီးအကြေားကို ဖော်ပြနေပါသည်။ ဘုရား သခင်နှင့်သမ္မာကျမ်းစာကိုငြင်းပယ်သော ကမ္ဘာကြီး၊ လူမျာစွာတို့က ရိုင်းစိုင်ခက်ထန်ပြီး မကောင်းမှုနှင့်စာတန်အုပ်စိုးသောကမ္ဘာကြီး၊“ဘုရားတရားကိုင်ရှိုင်းပြီးအသက်ရှင်သောသူအား လုံး” ( ခရစ်ယာန်ကဲ့သို့အသက်ရှင်သူများ ) ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရာ ကမ္ဘာကြီး၊ ခရစ်ယာန် ကောင်းများ ရှုပ်ချခြင်းခံရာ ( အပိုဒ်၃ ) ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့တွင် ထိုအရာအားလုံးကို ကျွန်တော်ကို ကြည့်ရှုလေ့လာနေသည်။ ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးအခြေအနေကို အားလုံးမြင်တွေ့နေ ပြီးသားဖြစ်ပါသည်။ “လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု” ကိုဆန့်ကျင်သည့် ခရစ်ယာန်များကို လောကပညာရှင်များက ခြိမ်းခြောက်နေကြသည်။ အသင်းတော်ရှိ အသင်းသားများစွာကိုလဲ ခြိမ်းခြောက်နေသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်က တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းဝင် ၂၀၀၀၀၀ ကျော် ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။ များစွာသောသူတို့သည် ၎င်းတို့၏အသက်အတွက် အကြောက်အရွံ့မရှိ သည့် လုံခြုံသောနေရာသို့ ထွက်ပြေးနေကြသည်။ ယနေ့အချိန်သည် “ဘေးသင့်သော”၊ အန္တ ရယ်ရှိသော၊ မာရ်နတ်အုပ်စိုးသောအချိန်ကာလပင်ဖြစ်ပါသည်။ မွတ်စလင်များက အုပ်စိုးဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်နေကြသည်။ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုများဖြစ်ပျက်လျက်နေသည်။ မူယစ်ဆေးစွဲမှုများ သည် ပျံ့နှံ့လာနေသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်များကို နေရာအနှံ့၌ ဖျက်ဆီးခံနေရသည်။ ကျောင်း တွင် ဆော့ကစားခွင့်မရှိဟု ကလေးများကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လူမျိုးနှင့်ကမ္ဘာ ကြီးအပေါ် ကြောက်မက်ဖွယ်သောအရာများဖြစ်ပျက်လာတော့မည်ဟူသောအချက်ကို လူ တိုင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြဟန်ရှိပါသည်။
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် ဘေးသင့်သောအချိန်ကာလတွင် အသက်ရှင်နေကြပါသည်။ ဗြိတိန်ဧဝံဂေလိဆရာ Leonard Ravenhill က “ဤနေရက်သည် နောက်ဆုံးသောကာလ ဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။ ဤစာကြောင်းကိုရေးသားပြီး မကြာမီတွင် မွတ်စလင်အစွမ်းရောက် များက နေရာအနှံ့တိုက်ခိုက်များရှိကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ မွတ်စလင်အစွန်းရောက်များက သွေးအေးအေးဖြင့် လူပေါင်း ၁၂၀ ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ကနဦးသတင်းများတွင်လည်း အိုဗားမားက “ISIS များပါဝင်သည်” ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ အလွန်ရယ်ဖွယ်ကောင်း လှပါတကား။ အိုဗားမားသည် Jimmy Carter နောက်ပိုင်း အားအနည်းဆုံးသော အမေရိကန် သမ္မတပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရက်သည် အလွန်ဘေးသင့်သောကာလဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာနေ့ရက် ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်များသည် ပျောက်ဆုံးသောလူများနှင့်ပြည့်နှက်နေ ပါသည်။ ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်သောကြောင့် အသင်းတော်ကို တစ်ဦးဦးက စွန့်ခွါသွားမှာကို သင်းအုပ်ဆရာများစွာက ကြောက်ရွံ့နေကြသည်။ အချို့သောသူများကို ပျောက်ဆုံးစေခြင်း ကြောက်ရွံ့မှုက အမျက်ရှစေသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် မုသားဖြင့်ပြည့်လျှံလျက်ရှိသည်ဟု ပြောသော လေမှုတ်ပရော်ဖက်ဆာများဖြင့် သင့်မိတ်ဆွေများပြည့်လျှံနေသည်။ သူတို့အ ကြောင်း သင်သိသည်။ ကျွန်တော်ပြောသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်းလဲ သင်သိသည်။ အဖြေက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သနည်း။ အဖြေကို အပိုဒ်ငယ် ၁၄ တွင် တမန် တော်က ပေးထားသည်။
“သင်သည် အဘယ်သူထံ၌ နည်းခံခဲ့ပြီးသည်ကို၎င်း သိမှတ်ကြ လော့။ အထက်က သင်၍ နှလုံးသွင်းမိသောအယူဝါဒ၌ တည်နေ လော့။” ( ၂ တိ ၃း ၁၄ )
“သင်ကိုယ်တိုင်သင်ယူလေ့လာခဲ့ပြီးသောအရာထဲတွင် စွဲမြဲနေပါ။” မည်သို့ပင္ဖြစ်နေစေကာမူ ဘုရားကျောင်းသို့ အမြဲလာပါ။ “သင်ကိုယ်တိုင်သင်ယူလေ့လာခဲ့ပြီးသောအရာထဲတွင် စွဲမြဲနေ ပါ။” ဒေါက်တာ Lee Roberson ( ၁၉၀၉-၂၀၀၇ ) က ဗြိတိသျှဘိုးဘေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူစွဲမြဲ ကိုင်ဆောင်ထားသောဆောင်ပုဒ်မှာ “တိုးတက်ကြီးပွားရန် နည်းလမ်းသုံးခု” – “နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်ကျော် တရားဒေသနာဟောပြောခဲ့သည့် ဆောင်ပုဒ်တစ်ခု” – “ ဝတ်ပြုကိုးကွယ် ခြင်း၌ သစ္စာရှိခြင်း- တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်၊ ညနေပိုင်းနှင့်ဗုဒ္ဒဟူနေ့ညနေပိုင်း” တို့ဖြစ်သည်။ (Lee Roberson, D.D., “ကြီးပွါးရန်နည်းလမ်းသုံးမျိုးဖော်ပြချက်”၊ The Man in Cell No. 1, Sword of the Lord Publishers, ၁၉၉၃၊ နောက်မျက်နှာဖုံး )
မည်သည့်အရာမှားယွင်းနေပါသနည်း။ ဘာမျှ မှားယွင်းမှုမရှိပါ။ မယုံကြည်သူများနှင့်စု ဖွဲ့ပြီး အချိန်ကုန်နေမည့်အစား အသင်းတော်ထဲ၌ပဲ ရှိနေပါ။ Las Vegas သို့မဟုတ် ဆန်ဖရင် စစ္စကိုစသည့် ဆိုးသွင်းသည့်မြို့များသို့ ပြေးလွှားနေမည့်အစား အသင်းတော်မှာပဲ ရှိနေပါ။ တနင်္ဂနွေနံနက်၊ ညနေပိုင်းနှင့်ဗုဒ္ဒဟူးညတိုင်း ဤနေရာ၌ ရှိနေပါ။ မည်သို့ဖြစ်လာမည်ကိုတော့ မသိပါ။ မှားယွင်းသည့်ဩဝါဒများသည် ကြီးထွားသထက်ကြီးထွားလာသည်ဖြစ်၍ “သင်ကိုယ် တိုင် သင်ယူလေ့လာခဲ့ပြီးသောအရာထဲတွင် စွဲမြဲနေပါ။”ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပါ။ အပိုဒ်ငယ် ၁၅ ကို ယခုကြည့်ကြပါစို့။
“ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းအလို့ငှါ ပညာကိုပေးနိုင်သောကျမ်းစာကို ငယ်သောအရွယ်မှစ၍ လေ့ ကျက်သည်ကို၄င်း သိမှတ်ကြလော့။” ( ၂ တိ ၃း ၁၅ )
ဒေါက်တာ McGee က ဤသို့ဆိုသည်။
မှားယွင်းသောဩဝါဒကမ္ဘာကိုဆန့်ကျင်သည့် တစ်ခုတည်းသော အဆိပ်ဖြေဆေးမှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ( သမ္မာကျမ်း စာ ) ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသားသမီးများအတွက် တစ်ခုတည်း သော အသက်ရင်းမြစ်သည်လည်း ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် သမ္မာကျမ်းစာကို နေ့ရက်တိုင်း ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းမရှိလျှင် မှားယွင်းသောအယူဝါဒ ၏လွှမ်းမိုးမှုကို ခံရပေမည်။ အပိုဒ်ငယ် ၁၅ ကို ယခုဖတ်ရှုပါ။
သမ္မာကျမ်းစာက ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း ( လမ်းကြောင်း ) ကို ပေးသည်သာမက၊ လက်ရှိမကောင်းသောကမ္ဘာကြီးထဲကလည်း ကယ်တင်နိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို အစဉ်မ ပြတ်လေ့လာခြင်းသည် ( အဖြေ ) ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်မှာ ကျွန်ုပ်၏အငြင်းပွါးချက်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် “ယေရှု ခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှါ ပညာကိုပေး နိုင်သောကျမ်းစာ” ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြစ် ( မကောင်းသောကမ္ဘာ ထဲတွင် ) မည်သို့အသက်ရှင်ရမည်ကိုလည်း ဥာဏ်ပညာရှိစေပါ သည်။
သမ္မာကျမ်းစာကို အဘယ့်ကြောင့် ဖတ်ရှုပြီး နာခံရမည်နည်း။ အခြားစာအုပ်များနှင့် လုံးဝမတူညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပိုဒ် ၁၆ ကို ကြည့်ကြပါစို့။
“ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအား ဖြင့်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏လူသည် စုံလင်သောသူ၊ ကောင်းသော အမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို ပြုစုခြင်းအလို့ငှါ ပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မည်အ ကြောင်း၊ ဩဝါဒပေးခြင်း၊ အပြစ်ကိုဘော်ပြခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာ ပြု ပြင်ခြင်း၊ တရားကို သွန်သင်ခြင်းကျေးဇူးများကို ပြုတတ်၏။” ( ၂ တိ ၃း ၁၆ )
ဒေါက်တာ W. A. Criswell ( ၁၉၀၉-၂၀၀၂ ) သည် သမ္မာကျမ်းစာကို သေချာပိုင်းခြားတတ်သူ ဖြစ်ပါသည်။ သူက ဤသို့ဆိုသည်။
ပေါလု၏ဆိုလိုရင်းကို အရှင်းလင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်ပေးနိုင်သည် မှာ အောက်ပါအတိုင်း အနက်ဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်မှုတ် သွင်းတော်မူသောကြောင့် ကျမ်းစာရှိသမျှသည် ကောင်းသောအမှု အမျိုးမျိုးကိုပြုပြင်သည်။ မူရင်းကျမ်းစာက ဤသို့ဖော်ပြထားပါ သည်။ ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းသောအရာဖြစ်သည်။ ( သီဩနယူ တိုးစ်၊ ဂရိ ) စသဖြင့်၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်က်ိုယ်တော် တိုင်ထံမှ လက်ခံရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ထိန်းသိမ်းထား သော သမ္မာကျမ်းစာအယူဝါဒက ထိုနှုတ်ထွက်စကားများသည် “ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူခြင်းဖြစ်သည်” ဟူ၍ပေတည်း။ ပေတရုဒုတိယစာစောင် ၁း ၂၁ က သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်စေလိုသောစကားလုံးများဖြင့် စာရေးသူများ ကို အဆက်အသွယ်လုပ်ဆောင်ပေးသည့် သက်သေအထောက် အထားများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ (W. A. Criswell, Ph.D., The Criswell Study Bible, ၂ တိမောသေ ၃း ၁၆ မှတ်စု )
၂ ပေတရု ၁း ၂၁ က “ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တိုက် တွန်းတော်မူခြင်းကိုခံရ၍” ဟု မိန့်တော်မူသည်။ “တိုက်တွန်းတော်မူသည်” ဟူသောစကားလုံး သည် ဖီရိုဟူသော ဂရိစကားလုံးမှလာခြင်းဖြစ်သည်။ “သယ်ဆောင်သည်” ဟု ဆိုလိုပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ထိုကျမ်းစာကို အစပြုရေးသားစေသူ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ “သယ်ဆောင် သို့မဟုတ် ထမ်းရွက်ခြင်းကြောင့် အမှားအယွင်းမရှိပါ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်က သမ္မာကျမ်းစာအမှားအယွင်းမရှိရလေအောင် စာရေးသူများကို စကားလုံးသုံးနှုန်းများ ကို ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ဟေဗြဲနှင့်ဂရိကျမ်းစာများသည် လူသားတို့ထံ ဘုရားသခင်ပေးထား သော ဘုရားသခင်၏နှုတ်တော်ထွက်ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Henry M. Morris က “သမ္မာ ကျမ်းစာရှိသမျှ၊ ကျမ်းစာတစ်ခုချင်းစီ ပါဝင်သည်။ အတွေးအခေါ်တစ်ခုတည်းသာမက ရေးသားမှုပုံစံ၊ ရေးသားသည့်စကားလုံးများလည်းပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင် ( မှုတ် သွင်းထားသော ) စကားလုံးများသည် ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောမှုတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်” ဟု ဆိုပါသည်။ (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, ၂ တိမောသေ ၃း ၁၆ )
“ပလင်နရီ” ဟုဆိုရာတွင် “ကျမ်းစာအားလုံး” ကိုဆိုလိုသည်။ “ဗာ ဗယ်” ဟုဆိုရာတွင် “စကားလုံးတိုင်း” ကို ဆိုလိုသည်။ “မှုတ်သွင်း ခြင်း” မှာ “ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းသည်” ဟု ဆိုလိုသည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာရှိသမျှကို ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းသည်။ ၎င်းသည် ကျမ်း စာရှိသမျှ၊ စကားလုံးတိုင်း မှုတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ မူရင်းခရစ် ယာန်အယူဝါဒ၏မှန်ကန်သောခံယူချက်ဩဝါဒဖြစ်သည်။” ( ဒေါက် တာ R. L. Hymers, Jr.)
သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခုလုံး၏ဟေဗြဲနှင့်ဂရိစကားလုံးများသည် “သီအိုဖင်စတော့စ်” ၊ “ဘု ရားသခင်မှုတ်သွင်းသည်”၊ ဘုရားသခင်၏မှုတ်သွင်းခြင်းမှ ရရှိသည်များပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပရော ဖက်များနှင့်တမန်တော်များက ဟေဗြဲနှင့်ဂရိစကားလုံးများဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က သူတို့စိတ်နှလုံးကို တိုက်တွန်းတော်မူသည်အတိုင်း ရေးသားခဲ့ကြသည်။ မှုတ်သွင်းခြင်းဆိုရာ တွင် KJV အပါအဝင် ဘာသာပြန်ခြင်းကို မဆိုလိုပ။ါ ပရောဖက်နှင့်တမန်တော်များရေးသား ထားသော ဟေဗြဲနှင့်ဂရိစကားလုံးများကိုသာ ဆိုလိုပါသည်။ ပင်လယ်သေစာလိပ်များက ဟေဗြဲကျမ်းစာအပေါ် ဘုရားသခင်၏ထိန်းသိမ်းမှုကို ပြသသည်။ မူရင်းဂရိစာမူသည်လည်း ဂရိ ဓမ္မသစ်ကျမ်းအဖြစ်သို့ပြောင်းရာတွင် ယုံကြည်လောက်သောစံရှိပါသည်။ သင်သည် King James ကျမ်းစာကို ဖတ်သောအရာ ဟေဗြဲနှင့်ဂရိဘာသာစကားမှ ဘာသာပြန်ဆိုထားသော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။ ဒေါက်တာ B. B. McKinney က တောင်ပိုင်းနှစ် ခြင်းကျမ်းစာကျောင်း၊ Baylor တက္ကသိုလ်တွင် ဂီတငှါ၌ ခေါင်းဆောင်အနေဖြင့် နှစ်ပေါင်းများ စွာ လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် Baylor နှင့်အခြားတောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်း တော်ကျောင်းရှိလီဗရယ်ဆရာများက သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် အမှားအယွင်းရှိသည်ဟု သင်ပေး ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဒေါက်တာ McKinney က “သမ္မာကျမ်းစာမှန်ကန်ကြောင်းသိသည်” တေး သီချင်းကို ရေးစပ်သီကုံးခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာ McKinney သည် ဒေါက်တာ John R. Rice ၏ မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာ၏အမှားအယွင်းကင်းခြင်းအကြောင်းကို အကြွင်းမဲ့လက် ခံယုံကြည်ထားသူလည်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ McKinney ၏ တေးသီချင်းက ဤသို့ဆိုသည်။
ကျမ်းစာသည် မှန်ကန်ကြောင်း သိပါသည်။
မှားယွင်းသူများက ကျမ်းစာကို ငြင်းပယ်ကြသော်လည်း၊
အချိန်တိုင်း နာရီတိုင်း ချိုမြိန်သာယာနေဆဲ၊
ကျမ်းစာမှန်ကန်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သိသည်၊ သိသည်၊ သိပါသည်။
( “ကျမ်းစာမှန်ကန်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သိသည်” Dr. B. B. McKinney,၁၈၈၆-၁၉၅၂ )
ကျွန်တော့်ရဲ့ သင်းအုပ်ဆရာအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာဆောင်ရွက်သူ ဒေါက်တာ Timothy Lin ထံမှ သမ္မာကျမ်းစာကို ကောင်းစွာ သင်ယူလေ့လာရသည်။ သူသည် သမ္မာကျမ်းစာကို ကောင်းစွာပိုင်းခြားတတ်သောသူဖြစ်သည်။ Bob Jones တက္ကသိုလ်၌လည်း စာသင်ပေးသူဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူသည် Taipei, Taiwan ရှိ တရုတ်ဧဝံဂေလိ တက္ကသိုလ်၌ ကျောင်းအုပ် ဖြစ်လာသည်။ ကျောင်းအုပ်ဖြစ်လာရာတွင် ကျွန်တော်အမြဲတမ်း တွေ့ရဆုံရလေ့ရှိသည့် ဒေါက်တာ James Hudson Taylor III နေရာတွင် အစားထိုးဝင် ရောက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အခြားဆရာမှာ ဒေါက်တာ J. Vernon McGee ဖြစ်သည်။ သူ၏ရေဒီယိုတရားဟောအစီအစဉ်ကို ဆယ်နှစ်တိုင်တိုင် ကျွန်တော်နားထောင်ဖူးသည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာသည် မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းကို ဤဆရာကြီးများထံ သင်ယူလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သည် အခြေခံဘွဲ့ကို ရရှိရန် လော့ဒ်အိန်ဂျယ်၊ ကာပြည်နယ်သို့ သွားသောအခါ ထိုကျောင်း၌သင်ကြားပေးကြသည့် သမ္မာကျမ်းစာလက်မခံသော လီဗရယ် များနှင့်တွေ့စဉ် ရှုပ်ထွေးမှုမရှိတော့ပါ။ သူတို့မှားယွင်းကြောင်း၊ သမ္မာကျမ်းစာသာလျှင် မှန်ကန်ကြောင်း ကျွန်တော်သိသည်။ ထို့နောက် ဆန်ဖရင့်စစ္စကိုအနီးရှိ Golden Gate Baptist Theological Seminary တွင် မာစတာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ထိုနေရာတွင်ရှိ သည့် ပရော်ဖက်ဆာတိုင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာကို ငြင်းပယ်သောသူများဖြစ်ကြောင်း သဘော ပေါက်လာသည်။ ထိုအရပ်၌ရှိနေခြင်းကို ကျွန်ုပ်မုန်းသည်။ ထိုနေရာတွင်ရှိနေခြင်းက အသက် မဲ့နေသလိုခံစားရပါသည်။အသေကောင်းလိုခံစားရပါသည်။“အပြစ်၌သေလျက်ရှိသော” ပရော် ဖက်ဆာများ၏သင်ကြားပေးခြင်းကို ခံရသည်။ ( ဧဖက် ၂း ၁ ) ထိုအရပ်တွင်ရှိသော သူများ သည် “အမှောင်အကြောင်းသာနားလည်သူများ၊ ငြင်းဆန်သောသဘောဖြင့် ဘုရားအသက် နှင့်မဆက်နွယ်သူများဖြစ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့စိတ်နှလုံး ( များ ) သည် မှောင်မိုက်ရှိ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။” ဧဖက် ၄း ၁၈
သူတို့ပြောသည့်မုသားကို မှတ်မိသေးသည်။ ကျွန်တော့်မေးခွန်းအပေါ် သူတို့အဖြေကို လည်း မှတ်မိသေးသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သင်ကြားပေးသည့် လီဗရယ်အကြောင်း တစ်လုံး တပါဒကိုမျှ လက်ခံခြင်းမရှိပါ။ ဆာလံ ၁၁၉ အပိုဒ်ငယ် ၃ က မှားယွင်းသည့်ကျောင်း၌ တက်ခဲ့ ရသည့် ခက်ခဲသောသုံးနှစ်တာကာလအတွင်း ရရှိသောအကူအညီပင်ဖြစ်ပါသည်။
“ကိုယ်တော်၏တရားကို အကျွန်ုပ်သည် အလွန်နှစ်သက်ပါ၏။ တနေ့လုံးဆင်ခြင်အောက်မေ့လျက်နေပါ၏။ ပညတ်တရားတော် သည် အကျွန်ုပ်၏ရန်သူတို့ထက်၊ အကျွန်ုပ်ကိုသာ၍ပညာရှိစေပါ ၏။ ပညတ်တရားတော်သည် အကျွန်ုပ်၌ အစဉ်တည်ပါ၏။ သက် သေခံတော်မူချက်တို့ကို အကျွန်ုပ်သည် ဆင်ခြင်အောက်မေ့သော ကြောင့်၊ အကျွန်ုပ်၏ဆရာအပေါင်းတို့ထက် သာ၍နားလည်ပါ၏။” ( ဆာလံ ၁၁၉း ၉၇-၉၉ )
မာရ်နတ်လွှမ်းမိုးသော ထိုကျောင်း၌ ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအဆုံးပိုင်းတွင် သေလူကဲ့ သို့ဖြစ်လေသည်။ ဆက်သွားနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်အားစောင့်ထိန်းပေးသူမှာ သမ္မာကျမ်းစာသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်ခွင်ထက်မှာ ဆာလံ ၁၁၉ ကိုဖွင့်ကာ ကန့်လန့်ထားသော သမ္မာ ကျမ်းစာအုပ်မှ တစ်ပါး အထီးကျန်စွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပေါင်း၊ အိပ်ခဲ့ရပေါင်းရက်တွေ မနည်းပေ။ “လောကရဲ့မကောင်းသောအမှုအရာကို ဆန့်ကျင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ သမ္မာ ကျမ်းစာပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသားသမီးများအတွက် တစ်ခုတည်းသော အသက်ရှင်ရာရင်းမြစ် မှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့လိုသမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ကျမ်း စာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသည်။ ဘုရား၏မှုတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရား ပြောစေလိုသမျှကိုပြောဆိုသည်။ သူပြောလိုသမျှပါဝင်သည်။ အကြောင်းမှာ ဤအကြောင်း ကြောင့် လူသားတို့စိတ်နှလုံအလိုကို ပြည့်စုံစေသည် ” ဟူသော ဒေါက်တာ McGee ၏ စကား ကို အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်လက်ခံပါသည်။ (McGee, ၎င်း၊ ၂ တိ ၃း ၁၄-၁၇ မှတ်စု )
မင်္ဂလာရှိသော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို အလွတ်ကျက်မှတ်လိုစိတ်ရှိပါ သည်။ သုတ္တံ ၃း ၅-၇ ကို ကြည့်ကြပါစို့။ ၎င်းသည် Scofield Study Bible တွင် စာမျက်နှာ ၆၇၃ ၌ တွေ့ရပါသည်။
“ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ကိုးစားလော့။ ကိုယ်ဥာဏ်ကို အမှီမပြုနှင့်။ သွားလေရာရာ၌ ထာဝရဘုရားကို မျက်မှောက်ပြု လော့။ သို့ပြုလျှင် သင်၏လမ်းခရီးတို့ကို ပဲ့ပြင်တော်မူလိမ့်မည်။ ငါ သည်ပညာရှိ၏ဟု ကိုယ်ကိုမထင်နှင့်။ ထာဝရဘုရားကို ကြောက် ရွံ့၍ ဒုစရိုက်ကိုရှောင်လော့။” ( သုတ္တံ ၃း ၅-၇ )
ထိုကျမ်းပိုဒ်များကို အလွတ်ကျက်မှတ်ပါ။ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ကျက်မှတ်ပါ။ “နှုတ်ကပတ် တော်ကိုဖွင့်ပြခြင်းသည် အလင်းကိုပေး၍၊ မလိမ္မာသောသူတို့ကို လိမ္မာစေတတ်ပါ၏။” ( ဆာ လံ ၁၁၉း ၁၃၀ ) နောက်ထပ် ကျွန်တော်ကျက်မှတ်သည့်ကျမ်းပိုဒ်မှာ ဆာလံ ၁၁၉း ၉၇-၉၉ ဖြစ် ပါသည်။ ၎င်းသည် Scofield Study Bible တွင် စာမျက်နှာ ၆၆၀ ၌တွေ့ရသည်။ အားလုံးမတ် တပ်ရပ်ပြီး ကျယ်ကျယ်ဖတ်ကြပါစို့။
ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပေးသော ထိုကျမ်းစာအတွက်ဆုတောင်းခြင်းက မယုံကြည် သောပရောဖက်ဆာများက လမ်းမှားဦးဆောင်ခြင်းမပါဘဲ လူ့ပညာအားဖြင့် အကူအညီပေး ပါလိမ့်မည်။ ထိုစကားလုံးများက ဘုရားသခင်ကိုငြင်းပယ်သောစာအုပ်များမှ သင့်ကို အကာအ ကွယ်ပေးမူမည်။ သင်သည် လောကကောလိပ်မှ ဘွဲ့ဒီဂရီရယူရန် ဖတ်ရှုရပါမည်။
မှားယွင်းပြီးအပြစ်ရှိသော ဤနေရက်ကာလတွင် သင်သည် သမ္မာကျမ်းစာကို နေ့ တိုင်းဖတ်ရှုစေလိုပါသည်။ ကျမ်းစာကို မည်သို့ချစ်ရမည်အကြောင်း သင်ယူရရှိပေလိမ့်မည်။ အထီးကျန်ဆန်သောအခါတွင် မိတ်ဆွေဖြစ်လာပေမည်။ သင့်ဘ၀ခေါင်းခဲစရာများကြုံခိုက် တွင် မိတ်ဆွေဖြစ်လာမည်။ အကြံကောင်းဥာဏ်ကောင်းပေးတတ်သူ Abraham Lincoln က “သမ္မာကျမ်းစာသည် လူသားတို့အားပေးသည့် ဘုရားသခင်ထံက အကောင်းဆုံးလက်ဆောင် ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ဘ၀နှင့်အကြောင်းတရားများစွာအတွက် အဓိကထား အသုံးပြုပါ။ သေသည် ဖြစ်စေ၊ အသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေ သာ၍ကောင်းသောလူဖြစ်လာစေမည်” ဟုဆိုပါသည်။
နောက်ထပ် အလွတ်ကျက်စရာကျမ်းပိုဒ်ရှိသေးသည်။ ဟေဗြဲ ၁၃း ၁၇ ကို ကြည့်ကြပါ စို့။ Scofield Study Bible တွင် စာမျက်နှာ ၁၃၀၄ တွင်တွေ့ရသည်။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ၿ့ပီး ကျယ်လောင်စွာ ဖတ်ပါ။
“သင်တို့ကို အုပ်သောသူတို့၏စကားကိုနားထောင်၍ နှိမ့်ချလျက်နေ ကြလော့။ သူတို့သည် ကိုယ်တိုင်စစ်ကြောခြင်းကိုခံရသောသူကဲ့ သို့၊ သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်၏အကျိုးအလို့ငှါ စောင့်နေကြ၏။ သင်တို့ အကျိုးကိုမဖြစ်စေတတ်သော ဝမ်းနည်းခြင်းမရှိ၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ ၍၊ သူတို့သည် စစ်ကြောခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်း သတိပြုလျက် နေကြလော့။” ( ဟေဗြဲ ၁၃း ၁၇ )
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါသည်။ သင့်အပေါ် “အုပ်စိုးသောသူများသည်” အသင်းတော်၏ သင်းအုပ် များဖြစ်ကြပါသည်။ တမန်တော် ၂၀း ၂၈ တွင် တမန်တော်ပေါလုက သင်းအုပ်နှင့်ခေါင်း ဆောင်များအား “မိမိအသွေးတော်ဖြင့်ရွေးဝယ်သော ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကိုထိန်း သောသိုးထိန်းများ” ဟု ရည်ညွှန်းပြောဆိုသည်။ အသင်းတော်၌ရှိသော သင်းအုပ်များနှင့် ခေါင်းဆောင်များသည် သိုးထိန်းက သိုးများကို ထိန်းကြောင်းသကဲ့သို့ လမ်းညွှန်ပေးရန်ဖြစ်ပါ သည်။ သင်းအုပ်သည် စုံလင်သောသူမဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကျွန်တော်၏သင်းအုပ်သည် မပြည့် စုံသော်လည်း သူသည် ဘုရားကိုချစ်၍အစေခံလိုသောသူဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကိုဆန့်ကျင်ပုန်ကန် လျှင် ယနေ့ သူနှင့်အတူ သင်းအုပ်လုပ်ရမည့်အခွင့်ရှိမည်မဟုတ်။
အလွတ်ကျက်မှတ်ရမည့် ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုကျန်သေးသည်။ ဟေဗြဲ ၁၀း ၂၄၊ ၂၅ ပင်ဖြစ် ပါသည်။ ၎င်းသည် Scofield ကျမ်းစာအုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာ ၁၃၀၀ ၌ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံး မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဖတ်ရှုလေ့လာကြပါစို့။
“ထိုမှတပါး၊ မေတ္တာစိတ်ရှိစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရသောအခွင့်ကိုရှာ၍၊ အ ချင်းချင်း တယောက်ကိုတယောက် ထောက်စာကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။ လူအချို့တို့၏ထုံးစံရှိသည်အတိုင်း၊ အချင်းချင်းစည်းဝေးခြင်းအမှု ကို မရှောင်မလွှဲကြနှင့်။ အချင်းချင်းတို့ကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြ လော့။ ကာလအချိန်ရောက်လုနီးသည်ကိုထောက်သဖြင့်၊ သာ၍ ကြိုးစားကြလော့။” ( ဟေဗြဲ ၁၀း ၂၄၊ ၂၅ )
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါသည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် အသင့် လျော်ဆုံးသောနေရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးသောအရာမှာ သင် အားကိုးရသည့်လူနည်းစုနှင့်အတူ အုပ်စုလိုက် ဆုတောင်းခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်အ နေနှင့်တော့ အသင်းတော်၌ လူနည်းစုများနှင့်အမြဲတမ်း ဆက်သွယ်မှုကိုပြုပါသည်။ ဒေါက် တာ Cagan နှင့်လူငယ်များသည် ဆုတောင်းအဖွဲ့တွင်မပါဝင်ကြလျှင် ဖျက်သိမ်းရပေါင်းမနည်း တော့ပါ။
“ပညာရှိတို့နှင့်ပေါင်းဘော်သောသူသည် ပညာရှိတတ်၏။ လူမိုက် တို့နှင့်ပေါင်းဘော်သောသူမူကား၊ ပျက်စီးတတ်၏။” ( သုတ္တံ ၁၃း ၂၀ )
နောက်ထပ်တစ်ခုကျန်ပါသေးသည်။ သမ္မာကျမ်းစာမိန့်ဆိုသမျှကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ သင် သည် အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲလာပေမည်။ သမ္မာကျမ်းစာက “သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည် လော့။ သို့ပြုလျှင် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။” ( တမန် ၁၆း ၃၁ ) သင်သည် ယေရှုကိုယုံကြည်သောအချိန်၊ စိတ်နှလုံးဖြင့် ကိုးစားသောအချိန်၌ ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ အမှန်ရောက်လိမ့်မည်။ သူသည် သင့်ကိုယ်စား အသက်စွန့်ခဲ့သည်။ ကားတိုင်ပေါ်၌ သံမှုဖြင့် ရိုက်ထားခြင်းခံရသည်။ ထိုအရာသည် သင့်အပြစ်အလုံးစုံအတွက် ဒဏ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ့အ သွေးတော်သည် ဒဏ်ချက် ငါးခုထက်တွင် စီးဆင်းလာသည်။ ထိုအသွေးသည် သင့်အား အပြစ်မှဆေးကြောပေးမည်။ ယေရှုထံသို့လာ၍ ကိုးစားပါ။ ထာဝရကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက် လိမ့်မည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ထိုအတိုင်းပင် မိန့်တော်မူသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် မုသားဆို သောကျမ်းမဟုတ်။ အကြောင်းမှာ နှုတ်ကပတ်တော်သည် အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပါတ်တော်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
သိရဖူးသမျှတွင် အမှန်ကန်ဆုံးမိတ်ဆွေ၊ ကိုယ်တော်၊
အားလုံးမှားယွင်းနေချိန် ကိုယ်တော်သည် အမှန်ဖြစ်သည်၊
ဤသမ္မာကျမ်းစာက မွန်မြတ်ပြီး မပြောင်းလဲသော ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ကျွန်ုပ် တို့ကို ဖော်ပြပါသည်။ အာမင်။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ မစ္စတာ Noah Song က ဂုဏ်တော် ချီးမွမ်းသည်။
“ကျမ်းစာမှန်ကန်ကြောင်း ကျွန်ုပ်သိသည်၊” ( ဒေါက်တာ B. B. McKinney,၁၈၈၆-၁၉၅၂ ရေးစပ်သည်။ )